Ogaden News Agency (ONA) – Xagee Hailemariam Desalegn Kudhuumanayaa?
Xagee Hailemariam Desalegn Kudhuumanayaa?
Posted by ONA Admin	/ August 9, 2014
Todobaadkan dhexdiisa waxaa shir ooga furmay madaxda wadamada Africa oo kulan laqaatay madaxwaynaha wadanka maraysaka Barak Obama. Shirkan waxaa goob joog ka,ahaa kudhawaad 90 shirkadood oo laga leeyahay wadanka maraykan. Shirkadahan waxay doonayaan ineey maal gashi kusameeyaan wadamadan Africa oon intooda badan wax horumar ah ama maalgashi uusan haba yaraatee kajirin.
Hadaba wadamada ay dawlada maraykanku sida gaarka taageero dhaqaale iyo mid ciidanba usiiso waxaa kamid wadanka Itoobiya. Shirkan waxaa kaqaybgalay ra,iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desegln oo lafilayay inuu kamid noqdo madaxda Africa kuwooda oogu tunka wayn ama oogu awooda badan laakiin taasi sanadkan madhicin.
Sida ay wararku sheegayaan Hailemariam ayaa kadhuuntay oo isqariyay in la,ogaado meeshu kunoolyahay iyo hoteelka uudagan yahay toona kadib markay boqolaal Itoobiyaan ah oo cashaysan ay mudaaharaad kusoo dhaweeyeen. Nidaamka wakhtigiisu dhamaaday ee EPRDF/TPLF ee Hailemariam uu horjoogaha uyahay yaa lagu eedaynayaa xadgudubyo kadhan ah banii,aadamniada.
Khudabro ukuurgalay cabsida iyo kalsooni la,aanta kamuuqata madaxda Itoobiya ee booqashooyinka kuyimaada dalalka reer galbeedya yaa loobidinayaa ineey salka kuhaysa habacsanaan iyo sida uu nidaamkii Wayaanuhu usii kala siibanayo. Waxaa kale oo Hailemariam ra,iisul wasaaraha Itoobiya ugaar ah oo cabsi intaas le,eg kubeertay kadib markii ay Jaamacada Azusa Pacfic University ay kala noqotay shahaado sharaf ladoonayay in lagudoonsiiyo, iyadoo lagu soo eedeeyay inuu nidaamka uu horjoogaha uyahay uu xasuuq ba,an uu kuhayo bulshada rayadka ah ee kuhoos dulman gumaysiga Itoobiya.
Hailemariam ayaa sidii tuugii dhuumasho kujira isagoo kabaqaya hadii la,ogaado meeshu daganyahay asaga iyo wafti kusheegta socdaalkiisa kuwehelisa ineey halis kujiraan. Waa waji cusub oo lasoo darsay madaxda wayaanaha ineey ciidu kuyaraato shacabkoodana ay ku kalsoonaan waayaan.